Zaza nariana tany amin’ny Nosy Komba : te ho lasa “hotesse de l’air” i Nazira | NewsMada
Zaza nariana tany amin’ny Nosy Komba : te ho lasa “hotesse de l’air” i Nazira
Par Taratra sur 08/03/2016
Lakalaka ny fiainana, efa natao ho isan’ny tsy velona intsony fa nariana teny amin’ny Nosy Komba i Nazira. Tsy izay anefa ny fandaharana fa toy ny ankizy rehetra, manana ny tanjony ity ankizivavy ity ankehitriny.
Vao telo taona monja i Nazira no narian’ny reniny tany amin’ny Nosy Komba. Nonina tao Nosy be Helle Ville izy tamin’izany. Sendra ireo teratany vahiny nanao fitsidihana teny amin’ity Nosy Komba ity anefa izy ka avotra tamin’ny ora farany.
Nanao ny fanadihadiana rehetra nahitana ny havany sy ny ray aman-dreniny ilay teratany vahiny. Nipoitra ihany ny reniny saingy nanao ny taratasy ara-dalàna fa tsy afaka ny hitaiza io zanany io. Tezaina etsy amin’ny foibe fitaizana zaza kamboty sy sahirana etsy Ambatolampy Tsimahafotsy i Nazira ankehitriny.
Efa 13 taona izy ankehitriny. Tsy tsaroany intsony ny zavatra niainany nandritra ny fotoana nanarian’ny reniny azy teny amin’ny Nosy Komba. Fiainana vaovao no iainany ao amin’ny foibe zazakely le Nid de Cigogne etsy Ambatolampy Tsimahafotsy.
“Tena faniriako ny hihaona mivantana amin’ny reniko indray andro any”, hoy izy. Tamin’ny taon-dasa, nentin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny foibem-pitaizana tany Nosy be Hell Ville i Nazira. Afaka nihaona tamin’ny iray tampo aminy dimy mianadahy ny tenany tamin’izany. Teo koa ireo fianakaviana. Tsy mba tonga teo kosa anefa ny reniny ka nampalahelo azy izany.
Te ho lasa “hotesse de l’air” i nazira raha ny faniriany eo amin’ny sehatry ny asa. Te hiaina fiainana ara-dalàna toy ny olon-drehetra ihany koa ny tenany na dia teo aza ny fahazazany tao anatin’ny sarotra.